के तपाईलाई उडुसले हैरान बनायो ? जान्नुहोस्, उडुस भगाउने घरेलु विधिहरु | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य के तपाईलाई उडुसले हैरान बनायो ? जान्नुहोस्, उडुस भगाउने घरेलु विधिहरु
के तपाईलाई उडुसले हैरान बनायो ? जान्नुहोस्, उडुस भगाउने घरेलु विधिहरु
२०७४, ६ भाद्र मंगलवार २०:१४
थाइम अजवाइनको फूल :
थाइम इटलीको एक लोकप्रिय बुटी हो, जसको प्रयोग खानामा स्वाद बढाउन गरिन्छ । थाइमले उडुसलाई सीधा असर त गर्दैन, तर यसको गन्ध उडुसले सहन गर्न सक्दैन । यसको गन्धले उडुसहरू लुकेको ठाउँबाट निस्कन्छन् । थाइमका पात जालीदार ब्यागमा राखेर उडुस भएको ठाउँमा राखिदिनुहोस् । हरेक ३ दिनमा ब्यागका पात निकालेर ताजा पात राख्नुहोस् । यसो गर्नाले तपाईं उडुसको तनावबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ ।
स्वीट फ्लेग :
स्वीट फ्लेगलाई कलामस पनि भनिन्छ । यसको प्रयोग रसायनमा आधारित कीटनाशक बनाउन गरिन्छ । यसमा एण्टी माइक्रोबियल गुण हुन्छ, जसको कारणले उडुसजस्ता परजीवी भगाउँछ । यसबाट बनेको हर्बल कीटनाशक तपाईं किचेन गार्डेनसम्बन्धी पसलमा पाउन सक्नुहुन्छ । स्वीट फ्लेगको पाउडर ल्याएर त्यसको प्याकेटमा लेखिएको निर्देशनअनुसार त्यसको घोल बनाउनुहोस् । त्यस घोललाई आफ्नो घरको कुनाकुना ९उडुस भएको ठाउँमा छर्कनुहोस् । उडुस भगाउन यो विधि पनि निकै प्रभावकारी मानिएको छ ।
Previous articleएउटै वडाबाट १ सय ५२ मेगावाट विद्युत
Next articleमगर विद्यार्थी संघ माउण्ट एभरेष्ट कमिटीले मनायो तीज